Qorqoor oo kulamo qarsoodi ah ka wado dalka Turkiga – news
Qorqoor oo kulamo qarsoodi ah ka wado dalka Turkiga
Madaxweyne Qoorqoor oo horey ula soo heshiiyay siyaasiyiintii mucaaradsanaa doorashadiisa ayaa hadda doonayo in uu wadal la furo hoggaanka Ahlu-Sunna.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo maalmo ka hor safar ku tegay dalka Turkiga ayaa la sheegayaa in uu halkaas kulamo qarsoodi ah kula leeyahay masuuliyiin sar sare oo ka tirsan maamulkii hore ee Ahlusunna Waljamaaca.
Kulanka ayaa la sheegayaa in uu soo qaban qaabiyay madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed, waxaana uuna u dhaxeeyaa, madaxweyne Qoorqoor, Sheekh Shaakir, Cabdisamad Macalin Maxamuud oo ah wiil uu dhalay hoggaanka Ahlusunna iyo xildhibaanno ka tirsan Baarlamaaka Soomaaliya.
Wararka ayaa sheegaya in kulankaan ay sidoo kale goob joog ka yihiin saraakiil ka tirsan Villa Soomaaliya, waxaa uuna u jeedkiisa ugu weyn yahay in lagu dhex dhexaadiyo madaxweyne Qoorqoor iyo maamulkii hore ee Ahlu-Sunna ee looga awood roonaaday deegaanada Galmudug.
Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo Cabdisamad Macalin Maxamuud ayaa la sheegayaa in ay u kala dab qaadayaan labada dhinac, iyadoona kulankaan uu dabada ka riixayo madaxweyne Qoorqoor oo horey ula soo hesheeyay dhinacyadii ka soo horjeeday oo ay isku hayeen siyaasadda Galmudug.
Madaxweyne Qoorqoor ayaa ka maqnaashaha garabka Ahlu-Sunna ee siyaasadda Galmudug u arka caqabad hortaagan horumarka uu ku tallaabsanyo maamulkiisa, isagoona isku dayayo in uu wax walbo wada heshiis ku dhameeyo.
Maamulkii hore ee Ahlu-sunna oo muddo toban sano ah ka talinayay deegaanno ka tirsan Galgaduud ayaa bilooyin ka hor looga awood roonaaday gacan ku heynta deegannadaas, kadib markii dagaal looga saaray magaalada Dhuusamreeb ee caasimadda Galmudug oo hoy u aheyd.
Farmaajo ayaa Qalbi Dhagax u dhiibay Itoobiya August 2017 kadib markii laga soo qabtay Galmudug, isagoo arintaas kula kulmay hoos u dhac sumcadda iyo taageeradda Shacabka Soomaaliya.
Khayre xilka maku wareejin doonaa RW Rooble?
Warar 27 September 2020 9:29